Mpanamboatra milina fanamboarana sôkôla confectionery | Yinrich
Hard Candy Deposit Line
Fizarana Lollipop Die-forming & Wrapping Machine
Candy malefaka Maty-forming Line
Machine Candy Cut And Wrap
Jelly Candy Deposit Line
Nametraka Marshmallow Line
Tsikombakomba sy lamosin'ny tsipika
Karazana ondana tsipika mitsako Gum
Tsipika miboiboika karazana hollow
Rafitra lanja mandeha ho azy (aws)
Toeram-pisakafoanana vacuum (bjc)
Vacuum Cooker Universal (tc)
Belt fampangatsiahana (scb)
milina famenoana biscuit
Masinina famenoana sy famenoana Macaron
Masinina famonosana vatomamy
Serivisy aorian'ny varotra& Warranty
Ny mpiara-miasa azo itokisana amin'ny indostrian'ny Candy, Choco & Bakery
Ny fitaovan'ny confectionery dia tsipika fanangonana amin'ny famokarana vatomamy. Yinrich dia matihanina mpanamboatra fitaovana confectionery ao Shina, manana sôkôla coating fanaovana milina, ara-barotra confectionery fitaovana amidy. Matihanina tokoa ny milina fanaovana confectionery, fitaovana fandrahoan-tsakafo, fitaovana fanodinana confectionery, fitaovana famonosana confectionery, sns.
Laharana fametrahana vatomamy Jelly
Ny andiany GDQ an'ny YINRICH dia natao manokana hanaovana vatomamy jelly tsy misy starch, tanjaka avy amin'ny 70kgs/ora ka hatramin'ny 500kgs/ora. Ny takelaka mikasika ny HMI ho mora ampiasaina; Dosing paompy ho an'ny tsindrona mandeha ho azy ny loko, tsiro sy ny asidra; Roa miloko miloko, roa sosona miloko roa sosona, afovoany famenoana, ary tsotra jelly vatomamy azo atao amin'ity tsipika ity. Ny fametrahana servo-driven dia fehezin'ny programa PLC.
Tsipika marshmallow extruded
Ny milina andiany EM dia ny faobe dia aerated amin'ny YINRICH's aerator, avy eo dia mizara ho maro renirano. Hatsindrona ny tsirony sy ny loko isaky ny renirano. Avy eo ianao dia afaka mamokatra karazana vokatra manintona isan-karazany miaraka amin'ny extruder manokana an'ny YINRICH, toy ny loko tokana, loko mitambatra, loko 4 miolakolaka, ary na dia vokatra extruded feno aza.
tsipika fametrahana lollipop
Ny andiany GDL an'ny YINRICH dia novolavolaina hanaovana lollipops apetraka, tanjaka avy amin'ny 120kgs/ora ka hatramin'ny 500kgs/ora. Ny takelaka mikasika ny HMI ho mora ampiasaina; Dosing paompy ho an'ny tsindrona mandeha ho azy ny loko, tsiro sy ny asidra; Misy miolakolaka miloko roa, miloko roa misy sosona roa, famenoana afovoany, ary lollipop mazava dia azo atao amin'ity tsipika ity. Ny fametrahana servo-driven dia fehezin'ny programa PLC. Misy rafitra fampidirana tapa-kazo mandeha ho azy.
Masinina sandwich (Cookie Capper)
Ity horonantsary ity dia milina sandwich (cookie capper) nataon'i Yinrich, izay tsipika fanangonana cookie, milina cookie sandwich. Yinrich dia matihaninampanamboatra fitaovana confectionery. Mandritra izany fotoana izany dia manome milina sandwich isan-karazany (cookie capper) sy milina biscuit crème ho an'ny orinasa mpamokatra cookies.Ity milina sandwich andian-dahatsoratra JXJ (cookie capper) ity dia azo ampifandraisina amin'ny conveyor fivoahan'ny orinasa mpanamboatra cookies, ary afaka mampifanaraka azy ho azy, mametraka ary mipetaka amin'ny hafainganam-pandeha 300 cookies andalana (150 andalana sandwiches) isa-minitra. Ny karazana biscuit malefaka sy mafy, mofomamy dia azo karakaraina amin'ny milina sandwich (cookie capper). Izy io koa dia azo omena amin'ny alàlan'ny famahanana magazine biscuit sy rafitra fanondroana. Ny milina cookie sandwich avy eo dia mampifanaraka, manangona, mampifanaraka ny vokatra, mametraka famenoana marina, ary avy eo manarona ny tampony amin'ny vokatra. Ny sandwich avy eo dia alefa ho azy any amin'ny milina famonosana, na amin'ny milina enrobing ho an'ny dingana fanampiny. Toy izany no fomba fiasan'ny milina sandwich (cookie capper) ny biscuit.Famaritana ara-teknika lehibe amin'ny tsipika fivorian'ny cookie:Fahafahana famokarana: appro.14400~21600 sandwiches/minVoka-boankazo voatokana: 30pcs/minFametrahana loha: 6 hatramin'ny 8Lohan'ny fametahana mofomamy: 6 hatramin'ny 8Hery: 380V/12KWSakan'ny fehikibo: 800mmHabe: L: 5800 x W: 1000 x H: 1800mm
Hatramin'izao, YINRICH dia nahavita namatsy milina sôkôla, fitaovana fanodinana siramamy, fitaovana famonosana mofomamy, ary fitaovana hafa amin'ny confectionery ho an'ny mpanjifa any amin'ny firenena sy faritra 60 mahery eran'izao tontolo izao. YINRICH dia nametraka sy nahavita mihoatra ny 200 andalana famokarana sy ny confectionery fitaovana, ary nanangana ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa. Misaotra indrindra ireo mpiara-miombon'antoka eto ambany (tsy afaka mitanisa ny rehetra):
YINRICH® no mpanamboatra sy mpanondrana entana vokatra vita amin'ny siramamy avo lenta sy matihanina any Shina noho ny fanomezana ny fitaovana fanodinana siramamy avo lenta, milina fanaovana sôkôla ary milina fanodinana mofo sy fonosana, izay manana orinasa any Shanghai, Shina. Amin'ny maha-orinasa ambony indrindra amin'ny fitaovana sôkôla sy confectionery ao Shina.
YINRICH dia manamboatra sy mamatsy fitaovana feno ho an'ny indostrian'ny sôkôla sy ny confectionery, manomboka amin'ny milina tokana mankany amin'ny tsipika turnkey, tsy ny fitaovam-pandraharahana ara-barotra mandroso amin'ny vidiny mifaninana ihany, fa ny fahombiazan'ny toekarena sy avo lenta amin'ny fomba vahaolana manontolo ho an'ny confectionery. ary famokarana sôkôla.
Izahay dia manome ny famolavolana, ny famokarana ary ny fanangonana ireo fitaovana madinidinika kely sy antonony ary tsipika fanaovana sôkôla mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa manokana.